Fankalazana ny fidiran’ny Tompo tao Jerosalema – Trinitera Malagasy
Mt 21,1-11 Taona A/
Mk 11, 1-10 na Jn 12,12-16 Taona B/
Lk 19, 28-40 Taona D.
Isan-taona isika dia mankalaza ny Sampankazo, na ny marimarina kokoa mamerina ny fihobiana an’i Jesoa niakatra tao Jerosalema toy ny nataon’ireo mponin’i Jerosalema, henemana mialoha ny Paka (Mt 21,1-11 Taona A/ Mk 11, 1-10 na Jn 12,12-16 Taona B/ Lk 19, 28-40 Taona D). Mialoha ny Vavaka Fanamasinana ny “Sampankazo” anefa isika dia miventy io antsa nataon’ny Zanak’Israely io : “Hozàna! Hosoavina anie Ilay avy, amin’ny Anaran’ny Tompo; Hosoavina anie ny fanjakan’i Davida raintsika, izay efa tonga izao; hozana any amin’ny avo indrindra” (Mk 11,10).
Tany Jerosalema dia nankalazaina ny fidiran’i Jesoa ho any Jerosalema notantarain’ny Evanjely (Lk 19, 28-40) ka nanao prôsesiô ny vahoaka avy eo amin’ny Tendrombohitra Oliva miakatra mankany an-tanàna dia avy eo mankany amin’ny Fasana nandevenana fa koa nitsanganan’i Jesoa ho velona. Tany Roma kosa dia nankalaza ny fijaliana niaretan’i Jesoa ho antsika noho ny fanekeny ny sitrapon’ny Ray (Passio) sy ho fanehoany ny fitiavana lehibe indrindra. Ireo fety roa ireo no ankalazaintsika miaraka anio.
Tsy fahatsiarovana fotsiny ny fidirana ao Jerosalema anefa no atao fa mampahatsiaro antsika koa fa mpivahiny isika mizotra any ami’ilay Jerosaleman’ny Lanitra, manaraka an’Ilay Zanak’Ondry, manaiky hijaly sy ho faty, raha izany no takian’ny Fitiavana amintsika (Apok 21, 2-4). Mena ny akanjon’ny Mpisorona, manambara ny maha-vavolombelon’ny fitiavana azy ka mino fa handresy miaraka amin’i Kristy. Hafaliana àry araka izany no ankalazaintsika fa tsy alahelo. Faly satria nandresy i Kristy ary manavao ny finoantsika fa tsy misy lalan-kafa hahazoana famonjena sy fahasambarana raha tsy ny lalan’ny hazofijaliana.
Ndeha hohazavaintsika kely ary ireo fihetsika sy teny mampihavaka ny Fotoam-pivavahana amin’ny alahady Sampakazo.
Ny fitaingenana ampondra dia entina hilazana ny fanetren-tena, fa koa misy heviny hafa araka izay lazain’i Osea Mpaminany hoe : “Asora tsy hamonjy anay, izahay tsy hitaingin-tsoavaly; na hiteny hoe: Ry Andriamanitray ô! amin’ny asan’ny tànanay. Hianao, izay ahitan’ny kamboty fiantrana! (Osea 14, 4). Ny fanetren-tena no hahafahana miantso vonjy avy amin’Andriamanitra, manantena fa avy aminy irery ihany ny famonjena.
“Hosana ho an’ny Zanak’i Davida. Isaorana (εὐλογέω eulogeo) anie izay avy amin’ny anaran’ny Tompo! Hosana any amin’ny avo indrindra” (Mt 21, 9).
“Hosana! 10Hohasoavina (εὐλογέω eulogeo, nadika hoe isaorana ao amin’i Matio) anie ilay avy amin’ny anaran’ny Tompo; hohasoavina (εὐλογέω eulogeo, nadika hoe isaorana ao amin’i Matio) anie ny fanjakan’i Davida raintsika izay efa tonga izao; hosana any amin’ny avo indrindra”. (Mk 11, 9-10)
Inona no hevitr’izany ho antsika? Inona no tonga ao an-tsaintsika isaky ny miventy izany? Hozana dia avy amin’ny teny hebrio hoshi’a na’ ( הוֹשִׁ֨יעָ֥ה נָּ֑א) izay midika hoe : “vonjeo, izao ankehitriny izao; vonjeo malaky”. Ho an’ireo niventy azy tamin’izany dia namerina ny Salamo 118, 25 : Ry YHWH ô, omeo (izao נָּ֑א) ny famonjena! no nandikana azy, ka ny famonjena dia ny fiverenan’ny Fiketrahan’i Davida, araka ny nampanantenain’Andriamanitra (Iz 9,6) mba hiorenan’ny rariny sy ny hitsiny.
Dia ilay Zanak’i Davida (Matio), Mpanjaka avy amin’ny anaran’ny Tompo, Mpanjaka araka ny sitraky ny fony, andrandraina hitondra Fiadanana sy Famonjena izany no hobian’ireo vahoaka betsaka nanaraka an’i Jesoa niakatra avy any Jerikao (Mt 20, 29) sy ny Mponin’i Jerosalema tonga nitsena Azy, na dia ireo vahoaka ireo ihany aza, rehefa voasesiky ny hevi-dratsin’ireo Lohandohan’ny Mpisorona, noho ny fialonana (Mk 15, 10), nony afaka henemana, no niorakoraka hanameloka Azy ho faty manao hoe: “Fantsiho amin’ny Hazofijaliana Izy” (Mk 15,13). Midika izany fa raha tsy matotra ny finoantsika an’ilay Andriamanitra, ilay hany afaka hamonjy antsika, dia hivily ho azy any amin’ny zava-mandalo (fahefan’olombelona, harena, voninahitry ny tany) no hametrahantsika ny fitokisantsika. Mila dinihina matetika izay “nametrahantsika ny fitokisantsika : i Kristy ilay tsy mivadika mandrakizay” (2Tim 1, 12).
Ao amin’i Md Lioka dia izao no voalaza ao mikasika izay fankalazana ilay Mpanjaka izay: “Hankalazaina (εὐλογέω eulogeo, nadika hoe isaorana ao amin’i Matio) anie, hoy izy ireo, ny Mpanjaka avy amin’ny anaran’ny Tompo! Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie amin’ny avo indrindra!” (Lk 19, 38). Tsy fiadanana ho an’ny olona ety ambonin’ny tany intsony (Lk 2, 14), fa any an-danitra. Ao amin’ny famintinana ny vavaka nataon’i Jesoa dia tsy milaza ny fangatahana mba ho tanteraka ny sitrapon’Andriamanitra “ety an-tany tahaka ny any an-danitra” i Lioka. Eto kosa anefa dia heveriko fa manambara amintsika fa ny lanitra dia efa andramantsika sahady amin’ny fiombiana an’i Kristy miakatra ao Jerosalema, ka miombom-piadanana amin’ny Lanitra izay rehetra manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. “Fiadanana any an-danitra”.
Ao amin’i Matio koa dia misy zavatra hafa tsy hitovizany amin’i Marka sy Lioka. Ao amin’i Matio dia eo Βηθφαγή (Bethfagè, Mt 21,1: aviavy mbola tsy masaka) i Jesoa, maniraka ho any Betania angamba. Ho an’i Lioka eo Betania sy Betfagè, ho an’i Marka kosa dia tao Betania (Βηθανία Bethania Mk 11, 1: tranon’ny ory). Tsy dia misy manisy tsindrim-peo amin’irey zavatra ireny matetika, kanefa hahafahana mahazo ny tian’ny Evanjelista ambara ireny tsy fitovizana ireny. Aoriana kely dia tsy aviavy mbola manta fotsiny no lazain’i Matio sy Marka fa aviavy tsy nahitana voany ka nozoniny tsy hihinanan’iza na iza amin’ny voany intsony (Mt 21, 19).
I Betfagè dia toeram-pidiovan’ny Mpivahiny alohan’ny hiakarany ao Jerosalema. Manadio ny fontsika koa i Jesoa, mialoha ny hiakarantsika miaraka Aminy ao Jerosalema. Ny fanirahana ny mpianany “tsiroaroa”, ho vavolombelona fa “Andriamanitra irery ihany no famonjena” ho antsika, ary tsy amin’ny herin’ny soavaly (Sal 147, 10) fa amin’ny fanetren-tenan’ny ampondra no entiny manjaka, ka tokony hoentintsika koa mampanjaka Azy.
Ao amin’i Matio koa ampondravavy mifatotra sy ny zanany (Mt 21,1-2) no taingenan’i Jesoa. Lazain’i Md Justin (Dialogue avec Tryphon 53) fa fanahy inian’i Matio izany hoentiny hilazana fa ilay ampondravavy mitondra jioga dia Israely nofehezin’ny lalàna, ary ny zanak’ampondra kosa dia ny “tsy mpino”, samy antsoin’i Jesoa himbona anjara amin’ny fanjakany.
Manomboka ny Herinandro Masina isika rehefa mankalaza ity Fidiran’i kristy ao Jerosalema ity, fa indrindra amin’ny Fandinihana ny Fijalian’ny Tompo.
Ny Tenin’Andriamanitra ankalazaintsika amin’ity Fanompoam-pivavahana ity dia manambara ny sakafo farany hatramin’ny nahafatesan’i Kristy (Mt 26, 14 –27, 66). Araka izany dia azo lazaina ho famintinana ny herinandro masina manontolo. Tian’ny Litorjia avoitra amin’izany fa izay nambaran’i Kristy tamin’ny Fiaraha-misakafo farany, nanomezany antsika ny Sakramentan’ny Eokaristia dia notanterahiny teo ambony Hazofijaliana. Ny Fijaliana nanaporofoan’i Kristy ny Fitiavany antsika no ambaran’ny Eokaristia Masina ankalazaintsika. Ambaran’Izaia fa ny hery avy amin’YHWH no Vimiaina ho an’ilay Mpanompony, ka hahafahany mankahery ny reraka na dia ao anatin’ny fahoriana ihany koa aza ny tenany (Iz 50, 4-7).
Sitrapo tanteraka anefa ary safidy no nanekeny hietry (ho lasa tsinotsinona). Izany no nahamendrika azy hiditra ny voninahitr’Andriamanitra (Fil 2, 6-11). Araka ny Lovam-panahy ao amin’ny Fiangonana dia ny Fandinihana ny Fijalian’i Jesoa no loharanon’ny fanamasinan-tena maro. Haintsika tsianjery ohatra ny Vavaka fanaon’i Md Alfonso Maria de Liguori eo anatrehan’ny hazofijalian’i Kristy : « Ry Jesoa tsara fo sy mamiko indrindra…
Tsy ataontsika ambanin-javatra ary ny fandinihana ny fijalian’i Kristy, satria izay no lalana hahatsapantsika ny fitiavany antsika. Tsy afa-misaraka amin’ny fijalian’ny olombelona rehetra koa anefa ny fijalian’i Kristy. Atolotsika azy ny fijaliantsika sy ny an’ny olombelona rehetra vokatr’izao zava-mitranga izao, ary hosanatriavintsika mpianatr’i Kristy ny hanararaotra izao vanimpotoana izao hametsena na hitadiavana tombony ho an’ny tena. Fankalazana ny Paka ny fiaraha-mandresy ny fahotana miakara amin’i Kristy.
Ny Herinandro Masina no hankalazantsika ny faharavan’ny fanompoana Andriamanitra manao fahagagana mba hidiny ka hanavotany ny tenany avy eo ambony hazo: “raha zanak’Andriamanitra Izy dia aoka hidina ka hamonjy ny tenany ka hino Azy izahay”. Ny Andriamanitra inoantsika dia nijanona teo ambonin’ny hazo ary notrobahin’ny miaramila lefona ny fony, mba tsy hisalasalana fa maty Izy. Saingy ny fahafatesany no zary odifaty ho antsika.
Tsy ody gasy ny sampankazo, tsy tapa-kazo fa sampan-kazo hahatsiarovana ny fankalazana anio, hanamafisantsika ny maha-mpanjaka an’i Kristy ka Izy irery ihany no harahintsika amin’ny fomba fiainana, amin’ny fomba fihevitra… Tsy sanatria voafetran’ny fihetsika ivelany ny fanomezan’Andriamanitra antsika ny Fahasoavany; ireny dia mampahatsiaro antsika ny fahasoavana efa narotsak’Izy Mpanjakantsika ao am-pontsika, miaraka amin’ny Fanahiny.
Ny fiainantsika ary no atolotsika mba ho lalana hodiavin’Andriamanitra hanehoany ny voninahiny. Ny fanatonana ny Lakroà ao an-trano, na eny am-bozona dia tokony hanampy antsika hahatsiaro izany fitiavana izany ka mandrisika antsika hiaina ny tena maha-kristianina antsika, handà tena, hitondra izay fijaliana takian’ny fitiavana amintsika ary hanaraka an’i Jesoa amin’ny lalan’ny Voninahiny.
Alahady Sampankazo Taona D